Resaky ny mpitsimpona akotry : hazakazaka lavitr’ezaka | NewsMada
Resaky ny mpitsimpona akotry : hazakazaka lavitr’ezaka
Maro ny mpanakiana ny Filoham-pirenena izay ampangainy ho manomboka mialoha ny fotoana ny fampielezan-kevitra momba ny fifaninanana ny fifidianana izay ho Filohan’ny Repoblika, hatao alohan’ny faran’ny taona 2018 araka ny lalàna velona. Tsy misy misalasala intsony raha mikasika ny filatsahan’Andriamatoa Rajaonarimampianina eo amin’ny fifidianana izay handimby azy. Tsy eken’ny lalàna sy ny rariny na ny fangalana tombon-dàlana amin’ny fanaovana fampielezan-kevitra lasa aloha na ny fampiasana fitaovam-panjakana amin’ny fanatanterahana izany. Raha jery fohy dia mivandravandra ny fandinganan’ny Filoha ankehitriny izany didy izany, nefa eo andaniny dia noho ny mahafiloha azy dia zony ny manao fitsidiham-paritany toy ny nataony tany Mahajanga tamin’ny faran’ny herinandro ary ny fampiasany ny fitaovana amin’ny mahafiloha ny tenany.
Eo anefa dia raha mifandipatra toy izany ny fepetra mipetraka dia ny fahadiovan-tsaina no manjaka : fahadiovan’izay mampiasa an’izay voalazan’ny lalàna, fahadiovan-tsaina sy fahalalahan’ny mpitazana koa eo amin’ny fitsarany an’izany any an-tsainy.
Ny fiaingana diso aloha raha afaka ho lazaina hoe sitrany ahay aza ho tombon-dàlana, dia noho ny mahalavitr’ezaka azy dia arak’izay ny fitombon’ny sampona mety hitranga. Mila fitsofan-drano mba ho tody lavitra. Tsy avy any amin’ny mpifaninana kosa no afaka iandrasana tso-drano. Na tsy velom-pialonana aza izy ireo dia tsy afaka ho kianina raha milaza izany ho tsy rariny. Tsy miainga dia tsy mitovy ny fahafahana, noho izany dia azo lazaina fa misy fiangarana an-kolaka ao amin’ny lalàna. Nisy teo aloha teo fikasana hanao fanitsiana ny lalàna nefa tao anatin’ilay fikasana tsy nisy resaka mikasika an’ity fomba fiangarana ity. Ny mifanipaka amin’izany aza no saika hatranga. Adidy ho an’ny Filoha raha toa manam-pikasana hilatsaka amin’ny fifaninanana fandimbiasana ny toerana ny tenany, izay fepetra mitondra fanarenana mba hitoviana sata eo amin’ny fiadin-toerana, no saika foanana. Izany hoe ny fikasana dia ny fanesorana ny fepetra izay manalefaka ny tsy fitoviam-bitana. Izao tsy nirosoana amin’izany aza dia efa manorisory ny fiangaran’ny lalàna. Na izany na tsia, mbola malalaka ny sehatra ahafahan’ny tsy ampoizina hitranga.